MP3000 Planetary ကွန်ကရစ်ရောနှော
MP1000 Planetary ကွန်ကရစ်ရောနှော
MP750 Planetary ကွန်ကရစ်ရောနှော
MP500 Planetary ကွန်ကရစ်ရောနှော
MP150 Planetary ကွန်ကရစ်ရောနှော
30m3/h မိုဘိုင်းကွန်ကရစ် batch စက်ရုံ which is the smallest capacity concrete plant of CO-NELE Mobile ကွန်ကရစ် batch စက်ရုံ Series can be equipped with either 750l planetary concrete mixer or twin shaft concrete mixer. provides 30 m³/h vibrated concrete production capacity.
To get more details about the advanced manufacturing technology and the components of CO-NELE ကွန်ကရစ် batch စက်ရုံs, please visit our Why Should I Prefer CO-NELE?
စွမ်းအား kw 5.5 7.5 7.5 11
စွမ်းအား kw 53 69 97 129
ယခင်: 40m3/h Mobile concrete batching plant MBP10
နောက်တစ်ခု: MP100 Planetary ကွန်ကရစ်ရောနှော
တရုတ်မိုဘိုင်းကွန်ကရစ် batch စက်ရုံ
Co. , Nele ကွန်ကရစ်ရောနှော
Block သည် Co. , Nele ကွန်ကရစ်ရောနှော
ကွန်ကရစ်ပိုက်သည် Co. , Nele ကွန်ကရစ်ရောနှော
Co. , Nele Concr ete လိပ်ခေါင်းရောနှော
Co. , Nele ကွန်ကရစ်ပိုက်ရောနှော
Co-Nele ကွန်ကရစ် Block ကိုရောနှော
ကွန်ကရစ် batch စက်
ကွန်ကရစ် batch စက်ရုံ
ကွန်ကရစ် Mixing စက်ရုံ
High Quality 1m3 ကွန်ကရစ်ရောနှော
High Quality ကွန်ကရစ် batch စက်ရုံ
High Quality ကွန်ကရစ်ရောနှော
High Quality မိုဘိုင်း batch စက်ရုံ
High Quality မိုဘိုင်းကွန်ကရစ် batch စက်ရုံ
High Quality မိုဘိုင်း Mini ကိုကွန်ကရစ်အသုတ်လိုက်စက်ရုံ
High Quality အသင့်ဖြစ်ပြီလားရောနှောထားသောကွန်ကရစ် batch စက်ရုံ
ရောင်းရန် Mini ကိုမိုဘိုင်းကွန်ကရစ် batch စက်ရုံ
ရောနှောထားသောကွန်ကရစ် batch စက်ရုံ
မိုဘိုင်းကွန်ကရစ် batch စက်ရုံ
ရောင်းရန်မိုဘိုင်းကွန်ကရစ် batch စက်ရုံ
စျေးကွန်ကရစ် batch စက်ရုံ
အဆင်သင့်ရောနှောထားသောကွန်ကရစ် batch စက်ရုံ
အမွှာ Shaft ရောနှော batch စက်ရုံ
စိုစွတ်သောရောသမကွန်ကရစ် batch စက်ရုံ